Alote Myanmar - မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် Hospitality, Hotel, Tourism အလုပ်အကိုင်များ
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး Jobs in Myanmar
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး အလုပ် 24 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
ခရီးသွား အတိုင်ပင်ခံ | Ticketing Supervisor
World Myanmar Travels & Tours Co.,Ltd
* အတွေ့ကြုံအနည်းဆုံး ၁နှစ်ရှိပြီး Ticket System များကျွမ်းကျင်ရည်။ * နိုင်ငံခြားသားနေထိုင်ခွင့်နှင့် အခြားသော Immigration ကိစ္စရပ်များ ၊ Visa, Air ticket နှင့် အခြားသော ဆက်စပ် လုပ်ငန်းတာဝန်များအား ကျွမ်းကျင်ရမည်
အကျိုးအမြတ်: အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ ၈ ညေန ၅။ စေနေန ့တစ္ဝက္ႏွင့္တနဂၤေႏြ ၊ အစိုးရ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားပိတ္သည္။
Ticketing & Visa Consulting
Growth Together Myanmar
နိုင်ငံတကာ လက်မှတ် နှင့် ဗီဇာ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အတွေ့အကြုံရှိပြီး ကျွမ်းကျင်ရမည်။ Englလို ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ရမည်။ Start up ကုမ္ပဏီတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုသူ ပညာရေးကဏ္ဍကို စိတ်ဝင်စားသူ
အကျိုးအမြတ်: - Monthly phone bill allowance - Bonus on sale performance - Travel allowance - Lunch provided
လုပ်ငန်း၏ မူဝါဒများနှင့်အညီ ဝန်ထမ်းများကို ခေါ်ယူ၊ လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးခြင်း။ Dinning room များနှင့် လှေကားများ၏ သန့်ရှင်းရေးကို ပုံမှန် ဆောင်ရွက်ရမည်။ ဖောက်သည်များ စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန် လုပ်ဆောင်ရမည်တို့ကို ကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်ရမည်။ အငယ်တန်း (Housekeepers) များ၏ စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်စေရန် စောင့်ကြည့် သင်ကြားပေးရပါမည်။ ဖောက်သည်များ၏ တိုင်ကြားချက်များနှင့် မေးမြန်းချက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဆောင်ရွက်တုံ့ပြန်ရမည်။ သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများကို မှတ်တမ်းထားရှိကာ လိုအပ်ပါက ပြန်လည်သိုလှောင်ပါ။ ဝန်ထမ်းအင်အားနှင့် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကို စီမံခန့်ခွဲပါ။ စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အခြေခံ၍ ဝန်ထမ်းများကို အကဲဖြတ်ပါ သင်ကြားပေးရမည်။ စည်းမျဥ်းအားလုံးကို မှန်ကန်စွာ လိုက်နာစေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။ English Version Hire and train the junior staff according to restaurant policies. Make sure the rooms and stairways are regularly cleaned. Ensure high-level customer satisfaction. Monitor the performance of junior housekeeping staff. Respond to customer complaints and queries onatimely basis. Keeparecord of the cleaning products and restock when necessary. Manage the staff according to shifts and availability. Evaluate housekeeping staff on the basis of performance. Ensure all the rules are being followed properly.
- အခြေခံပညာ အထက်တန်းအဆင့်အောင်မြင်ပြီး ဖြစ်ရမည်။ -စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး ရိုးသားကြိုးစားပြီးဧည့်သည်များအပေါ်စိတ်ရှည်သူ ဖြစ်ရမည်။
ဧည့်လမ်းညွှန် | Tour Operator
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ နေရာထိုင်ခင်း၊ အာမခံ၊ ဗီဇာနှင့် အခြားခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုများကို စီစဉ်ရောင်းချခြင်း။ Customer များ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် မေးခွန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များပေးပြီး သေချာရှင်းပြရန်။ ခရီးသွားပြဿနာများ၊ ပဋိပက္ခများ၊ တိုင်ကြားမှုများ၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့် ပြန်အမ်းငွေများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်
Housekeeping (OJT)-5Posts
- Housekeeping Department တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက် သင်တန်းသူ/သားများအလိုရှိသည်။ - သင်တန်းတွင် duty mealကျွေးမည်။ - ရေရှည်သင်ယူနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
* အေတြ႕ၾကဳံအနည္းဆုံး ၁ႏွစ္ရွိၿပီး Ticket System မ်ားကၽြမ္းက်င္ရည္။ * ႏိုင္ငံျခားသားေနထိုင္ခြင့္ႏွင့္ အျခားေသာ Immigration ကိစၥရပ္မ်ား ၊ Visa, Air ticket ႏွင့္ အျခားေသာ ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအား ကြၽမ္းက်င္ရမည္
Public Management / House Keeper Manager
Guest room များနှင့် Public Area များအပါအဝင် Housekeeping Department ၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရန် အကောင်းဆုံးသော Customer Service နှင့် အမြင့်မားဆုံးသော သန့်ရှင်းမှုအား ဧည့်သည်များပေးစွမ်းနိုင်ရန် သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းများအား လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရမည် ဌာနနှင့်ဆိုင်သော Budgets ၊ Inventory access များနှင့် သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများနှင့် ပက်သက်ပြီးကြီးကြဲကွပ်ကဲရန် Room attendant များမှ Document Area များအားသန့်ရှင်းရေး ၊ အခန်းအတွင်းအပြင် ပျက်စီးထိန်းသိမ်းမှုများအား Front Office သို့ အချိန်နှင့်တပြေးညီတင်ပြရန် သန့်ရှင်းရေး အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း (Cleaning Equipement) များအား အမြဲတစေ စစ်ဆေးပြီး လိုအပ်ပါက ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများကို စီမံခန့်ခွဲလုပ်ဆောင်ရမည်
အကျိုးအမြတ်: Uniform + Ferry
တင်သောနေ့: 07 Nov 2021
- ဧည့်သည်များအား ခရီးဆောင်အိတ်များပို့ဆောင်ပေးခြင်း၊ ဆိုက်ရောက်နှင့်ထွက်ခွာချိန်တွင် ဧည့်သည်များအား တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ခြင်း၊ ဧည့်ကြိုကောင်တာဝန်ထမ်းအား အကူအညီပေးခြင်း - ရောက်ရှိလာသော ဧည့်သည်များအား နှုတ်ဆက်ပြီး ခရီးဆောင်အိတ်များ ထုတ်ယူခြင်း။ - ဧည့်သည်များအား အခန်းများဆီသို့ ခေါ်ဆောင်ကာ အခန်းတွင်းရှိပစ္စည်းများကို ရှင်းပြခြင်း။ - ခရီးဆောင်အိတ်၊ မက်ဆေ့ချ်များ၊ ဖက်စ်များ၊ ပက်ကေ့ခ်ျများကို ဧည့်သည်များထံ ပေးပို့ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်အတွက် အခြားတောင်းဆိုမှုများကို လုပ်ဆောင်ပေးရန်။ - ထွက်ခွာလာသော ဧည့်သည်များ၏ ခရီးဆောင်အိတ်များကို အခန်းတွင်းမှ ဧည့်ခန်းသို့ ပို့ဆောင်ပြီး ခရီးဆောင်အိတ်အားလုံးကို စာရင်းရှင်းကြောင်း ဧည့်သည်မှ စိစစ်ပြီးကြောင်း သေချာစေခြင်း။ - ဧည့်ခန်းနေရာကို သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ ထားရှိရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ - သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ခရီးဆောင်အိတ်များကို လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ခြင်း။ - ဟိုတယ်တွင် မည်သို့သော လုပ်ငန်းဆောင်တာများ လုပ်ဆောင်နေသည်ကို အပြည့်အဝ သတိပြုမိနိုင်ခြင်း။ - ယဉ်ကျေးပျူငှာစွာ၊ ဂရုတစိုက်နှင့်ဖော်ရွေသောဝန်ဆောင်မှုကိုပေးနိုင်ခြင်း။
Guest Service Agent (Yangon)
- ဧည့်သည်များကို ငွေစာရင်းဝင်ခြင်းနှင့် ငွေရှင်းခြင်းအပြင် အခြားသော ငွေရှင်းခြင်းတာဝန်များကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ - ဧည့်သည်များ မရောက်ရှိမီ ဆိုက်ရောက်စာရင်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်ပါက မှတ်တမ်းများကို ပြင်ဆင်ပေးခြင်း။ - ဌာနဆိုင်ရာစံနှုန်းများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ရောက်ရှိလာသောဧည့်သည်များကို ကြိုဆိုပေးခြင်း။၊ စာရင်းသွင်းပြီး အခန်းသော့ထုတ်ပေးခြင်း။ - Members များ အကျိုးခံစားခွင့်အားလုံးကို တသမတ်တည်းရရှိကြောင်း သေချာပြောပြပေးခြင်း Repeat/Regular ဧည့်သည်များနှင့် အခြား VIP များမှ အထူးအသိအမှတ်ပြုမှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ရရှိကြောင်း သေချာပြောပြပေးခြင်း။ - ဧည့်သည်မရောက်လာမီ အခန်းသို့ ကြိုဆိုရေးကတ်များနှင့် အဆင်တန်ဆာများကို ပြင်ဆင်ပြီး ပေးခြင်း။ - ဧည့်သည်များ၏ တောင်းဆိုချက်များနှင့် လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မီစေရန်အတွက် အခြားသက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် အနီးကပ် ချိတ်ဆက်ခြင်း။ - ဧည့်သည်မှတ်တမ်းစနစ်ကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပြီး ထပ်ခါထပ်ခါ ထိန်းသိမ်းခြင်း။ - ဝင်ငွေအများဆုံးရရှိရန် ဌာနဆိုင်ရာစံနှုန်းများနှင့်အညီ ဟိုတယ်အချင်းချင်းရောင်းချမှုနှင့် အိမ်တွင်းအဆောက်အအုံများကို မြှင့်တင်ခြင်း။ - ဧည့်သည်များ၏ မကျေနပ်ချက်များနှင့် မှတ်ချက်များကို လိမ္မာပါးနပ်စွာ ထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ်ခြင်း။ - ဧည့်သည်များ၏ မေးလ်များ၊ မက်ဆေ့ချ်များနှင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို ဖြေကြားပေးခြင်း - ဧည့်သည်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ခြင်းမရှိကြောင်းသေချာစေခြင်းဖြင့် ဧည့်သည်များအားလုံး၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်လျှို့ဝှက်မှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်း။